Abbootiin Seeraa Dhimma Ajajaa Waraanaa Duraanii Boosiniyaa Ilaalu Jualqaban
Waxabajjii 08, 2021
Ajajaa waraanaa duraanii biyya Boosiniyaa Sarb Raatikoo Maaldiiks
Abbootiin seraa Manna murti mootumoota gamtoomanii dhimma ajajaa waraanaa duraanii biyya Boosiniyaa Sarb Raatikoo Maaldiiks irrati murtii yakka bara 2017 kennamee ilaalichisee ol hiyyanoo dhihaate ilaalaa jiran.
Raatikoo Maaldiik , yeroo ammaa nama wagaa 78 yemmuu ta’an ajjeechaa bara 1992-95 musilimootaa Serebeniikaa 8000 ta’niin irratii raawwatameen dhimma walqabteen yakkamanii bara jireenyaa isanii mana hidhaatii akka dabarsan itti murtaa’ee ture.
Haata’u malee abukaatonni isaanii murtichii dogoggoraa seerratii fi dhugaa qaba jechuudhaan ol iyyannoo dhiheesaniin Maaldiik akka gad lakisaman ykn dhimmii isaanii akka irra deebi’amee ilaalamu gaafatan.
Abootiin seeraa Mootumootaa gamtoomanii guyaa har’aa kan dhadachaa bananiif iyyannoo abukaatotaa ilaaluudhaaf.
Abbaan alangaa gama isaatiin Raatikoo Maaldiik yakka duguuggaa sanyii raawatan kan broo qabu jechuudhaan himateera.